The Irrawaddy's Blog: ကျုပ်လည်းပဲ သမ္မတဖြစ်ချင်သပ
သြော် …. လန့်သွားလေသလား။ ကျုပ်စကားကြောင့်လေ ..။ လန့်လောက်ပါရဲ့ဗျာ။ စကား စကား ပြောပါများ ... စကားထဲက ဇာတိလေးက ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်လာသကိုးဗျ။ ကျုပ်မယ် သမ္မတဖြစ်ချင်တဲ့စကားလေးတွေ ငြိမ်ငြိမ်သွားသလားလို့ပါအမောင်ရေ…။ ဒီတော့လည်း ကျုပ်က တစခန်းထလို့ သမ္မတလုပ်ချင်စကား ပြောရတာက ပွဲရှုပ်အောင် မဟုတ်ရဗျား။
ကျုပ်တို့ငယ်စဉ်ကများ သမ္မတက အစည်းအဝေးကြားက ငုတ်တုတ်အမောင်။ ကျုပ်သိသလောက် ညွှန်ကြားချက်ဆိုတာကလည်း မက်မောစရာ၊ ဆွေးနွေးစရာပဲ မရှိလို့လား။ တိုင်းသူပြည်သားလူအများက အေးဆေးပဲ။ ခုတော့ သမ္မတကလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအကြား ကြွားကြွားဝင့်ဝင့်။ တစ်နေ့ကတော့ ကျုပ်မြင်တာ အိုးဗျာ ……. ကျုပ်တို့နိုင်ငံတော်သီချင်းကို အဲသည် နိုင်ငံတော်က စစ်သည်တွေမယ် လော်ကြီးတွေမှုတ်၊ သမ္မတကြီးနဲ့ အဲသည်တိုင်းပြည် သမ္မတကြီးတို့က အလေးပြုစင်မြင့်ထက် ကြွားကြွားကြီးရပ်လို့။ ပြုံးတုံ့တုံ့ အမူအရာနဲ့ အားကျစရာကြီးဗျ။ ကျုပ်ရင်ထဲမယ် ကလိ ကလိ၊ သမ္မတဖြစ်ချင်လိုက်တာဗျာ။
အဲ…. သူများတိုင်းပြည်က နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းစက်ရုံကြီး သွားရောက်လေ့လာတော့လည်း အပြန်ကျတော့ ဂါရ၀လက်ဆောင်မွန်ပေးလိုက်ပြန်သေး။ ခင်ဗျားနှယ် ကျုပ်ရင်ထဲက သွားရည်တွေက တတောက်တောက်ကို ယိုဖိတ်လာတာလေ။ အို ကျုပ်သာ သမတကြီးဖြစ်ရင် ကျုပ်အတွက် လက်ဆောင်မွန်ကို ထမ်းသယ်ခဲ့ပြီး ရွာအ၀င်လမ်းက ကားစောင့်တဲလေးမှာကို ထင်းမီးဖိုဖို၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ရာဝင်အိုးနဲ့ ရေနွေးတည်ပြီး တရွာလုံးက ကလေးငယ်နဲ့ အမယ်အို အ၀ တိုက်ချင်သားဗျ။ အိုး… နည်းပညာလေး တောင်းခဲ့ပြီး …… ဟင် ခင်ဗျားက ကျုပ်ကိုပြက်ရယ်ပြုနေသလား။ ခင်ဗျားပြုံးပုံကဗျာ။ အဲသလို မလုပ်ချင်ပါနဲ့။ ခင်ဗျားနှယ် ရှေးပညာရှိ များစကားမကြားဖူးသရော့လား။ ပညာရှာ ပမာ သူဖုန်းစား တဲ့။
ကျုပ်တို့တိုင်းပြည် ဘယ်နေရာမဆို မြက်ခင်းကတော့ ဖြစ်သဗျ။ နို့ထွက်ပစ္စည်းက ခင်ဗျားကြီးတော်ဆီက လာတာမှ မဟုတ်တာ။ ကုန်ကြမ်းက နွားဗျ။ နွားက မြက်စား၊ ကောက်ရိုးစား သတ္တ၀ါဗျ။ ခုများ လမ်းဘေးမယ် ကြောင်စာတောင် အရံသင့်ရောင်းနေပြီဆို အာဟာရပြည့်နွားစာရော ကျုပ်တို့ဘာလို့ မရနိုင်ရမတုံး။ မတုံးစမ်းပါနဲ့ ကိုယ့်လူ။ နည်းပညာ ……. ဟုတ်လား။ အေးဗျ …. လိုက်နိုင်မယ်ထင်သူ နည်းပညာနောက်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်လူနှယ် ကျုပ်တို့လိုလူတွေကြောင့် ခက်တာ ဟုတ်လား။ ခင်ဗျားမလည်း ဟိုလူများလို ပြောတတ်တဲ့ ပါးစပ်ပဲ ရှိတာကိုး။ ဒီမယ် ပြောတတ်တဲ့ပါးစပ်များရှိရင် နားထောင်တတ်တဲ့နားလေးလည်း ရှိအောင်ကျင့်ဗျ။ ကျုပ်က ခုနက ခင်ဗျားပြောတာတွေ အတော်ကြာအောင် နားထောင်ပြီးသားလေ။ ကျုပ် ပြောခွင့်လေးကျတော့ မတွန့်တိုနဲ့ဗျာ။
ဒီမှာ အမောင် ကျုပ်တို့ နိုင်ငံက နည်းပညာပိုင်းနောက်ကျနေတာ နှစ်ငါးဆယ်။ အေးပါဗျာ ခင်ဗျားမယ် ကျုပ်ပြောသမျှ နောက်က လိုက်ထောက်နေလို့ ရှေ့မရောက်ဘူး။ ကျုပ်က အကြမ်းဖြင်းပြောတာလေ။ သေချာချင်ရင် လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နှစ်ကနေ စလို့ ရေတွက်တော့မောင်။ နောက်ကျနေလို့ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး မလိုက်နဲ့လို့ ကျုပ်က မပြောဘူးမောင်။ ကျုပ်တို့နည်းပညာနောက် လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးပြီးသား ခင်ဗျားကြီးတော်တိုင်းပြည်တွေက ကျုပ်တို့ကို ရပ်စောင့်နေမှာလား။ သူတို့က ဆက်သွားနေမှာလား။ စဉ်းစားကြည့်။
ကျုပ်တို့ အုပ်စုခွဲမယ်ဗျာ။ လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ လူမှုဘ၀ အကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းမယ့်အုပ်စု။ ကမ်းလက် ကို မျှော်လင့်နေသူများ အစီအစဉ်က ကူညီတာ၊ ထောက်ပံ့တာ၊ ကယ်ဆယ်တာ။ ခင်ဗျားရှင်းရမှာက ပရဟိတကလာတဲ့ ကူညီမှုက လတ်တလောအကြပ်အတည်းကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းတာ၊ ပေးကမ်းတာ၊ ထောက်ပံ့တာ။ ကျုပ်ပြောတာက ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ကျောင်းနိုင်အောင် လုပ်ပေးတာမျိုး၊ အခြေခံကျကျဗျာ….. ဘ၀ရပ်တည်မှုစင်မြင့်ဆောက်ပေးမှာ၊ အခြေခံအတတ်ပညာတွေ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်အောင် သင်ပေးမှာ။ ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့် အချိန်လိုတယ်နော်။ ဘ၀ရပ်တည်မှုစင်မြင့်ထက်ရောက်အောင်တက်ရမယ့် အချိန်ပိုင်းက ကူညီမှုနဲ့သွားမယ်ဗျာ။ ပရဟိတနဲ့ ခံထားမယ်ဗျာ။ လူငယ်တစ်ယောက် ကိုလူငါးယောက်က စုပြီး စင်မြင့်ပေါ်တင်မယ်ဗျာ။ သူစင်ပေါ်ရောက်ပြီဆို မိသားစု စင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုပါစို့ဗျ။
နောက်အုပ်စုတစ်စုဗျာ…..။ ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးမှု အုပ်စု။ ကျုပ်သိပါတယ် ခုလည်း အဲဒီအုပ်စုရှိသားဆိုတာ။ ကျုပ်သမ္မတဖြစ်ရင် အဲဒီအုပ်စုဥက္ကဌကြီး ငွေလှူတာရပ်၊ ကျေးလက်ရဲ့သဘာဝ၊ ပထ၀ီအနေအထား ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာပြီး မိုက်ခရိုဖိုင်နယ်စ့် Micro Finance လုပ်ပြီး လုပ်ငန်းစ၊ လုပ်ငန်း မဖြစ်ခင်ကြားကာလ ရှိဦးမယ်ဗျ။ အဲဒီအတွက် စဉ်းစား။ လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီဆို အဲဒီ့ကျေးရွာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက ခင်ဗျားနှယ် အိုကေပေါ့ဗျ။ အခြေခံပညာရေး တိုင်းပြည်က ရတဲ့ အခွန်နဲ့လိုက်ပေါ့ဗျ၊ အခြေခံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု တိုင်းပြည်အခွန်နဲ့လိုက်ပေါ့ဗျ။
နောက်တစ်အုပ်စုဗျာ…….။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ နည်းပညာ နောက်လိုက်ဖို့။ အဝေးကြီး သွားစရာမလိုဘူးဗျ။ ရန်ကုန်မြို့တော်မဟာမယ် ရှိပါ့ဗျား။ နိုင်ငံကြီးသား စာကြည့်တိုက်တွေမယ် နိုင်ငံကြီးသား စာမေးပွဲတွေ ဖြေနေတဲ့အုပ်စုလေ။ အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းတွေတက်နေတဲ့အုပ်စု……။ တိုင်းပြည်ကထောက်ပံ့စရာ မလို။ ပရဟိတရဲ့ အထောက်အပံ့ ကင်းလွတ်တဲ့ လူတန်းစား။ ခုလည်း ခင်ဗျား သိသင့်ပါ့။ နည်းပညာနောက်လိုက်လို့ သွားနေကြတဲ့ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်ရင်သွေးတွေ။ ပေါပါ့ဗျား စင်ကာပူမယ်၊ ယိုးဒယားမယ်၊ မလေးရှားမယ်၊ ဖိလစ်ပိုင်မယ်။ ဒုက္ခဗျား …. သင်းတို့လေးတွေ ပြန်မလာကြတာ။ နိုး….. နိုး ပြန်မလာချင်တာ မဟုတ်ရပေါင်ဗျာ။ ခင်ဗျားနှယ် ကျုပ်တို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေတောင် အပြိုင်ကြဲနေတဲ့ မျက်နှာစာအုပ်ဆိုတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က လူမှုကွန်ရက်ကလေးမယ် ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ ... သူတို့တွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ၊ အိမ်လွမ်းသံ၊ ကြေကွဲသံ။ အိုး ကျုပ်များ သမ္မတဖြစ်ခဲ့ရင် အဲသဟာ တိုင်းပြည်က ကျုပ်ကလေးတွေ ရင်ဖွင့်ကြိုလို့ လက်ကမ်းလိုက်မယ်။ လခ မြန်မာငွေ တစ်သ်ိန်းခွဲလောက်နဲ့ လက်ကမ်းလို့ကတော့ ခင်ဗျားနှယ် ဘယ်ရပါ့မလဲဗျ။ ကျုပ်တို့ ထိုက်သင့်တဲ့နေရာ၊ ထိုက်သင့်တဲ့လစာ ပေးနိုင်အောင် အချိန်ပေါ့ဗျာ လိုအပ်ပါသေးတယ်။
အေးဗျာ။ ကျုပ်က ဒိုင်ယာလော့ခ် သမ္မတတော့ မဖြစ်ချင်ပေါင်။ အော်ခင်ဗျားနှယ် ရေဒီယုိုက မိန့်ခွန်းလား ပြောမှာပေါ့ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် အလုပ်တွေ လုပ်နိုင်တာတွေ လုပ်ချင်တာတွေ။ နိုင်ငံတကာသွား အတွေ့ အကြုံတွေ။ ကျုပ် သတင်းထဲမယ်ကြည့်တော့ ခင်ဗျားနှယ် သမ္မတကြီးတဲ့ တိုင်းတစ်ပါးက နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးနေအိမ် အသွားလမ်းက ခတ်ကျဉ်းကျဉ်းပဲအမောင်။ နို့ပေမယ့် ကား မပိတ်ဘူးဗျ။ အဲသဟာမျိုးတွေ ရေဒီယိုမ်ိန့်ခွန်းမယ် ပြောမှာပေါ့။ လမ်းတွေမှာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း။ ဘယ်ကသာ ... ကျော်သူတို့ အမှိုက် ကောက်ထားလို့ရမှာတုန်းဗျ။ ခင်ဗျားနှယ် ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြောသဟာက လူကြီးလူကောင်းမဆန်ဘူး အမောင်။ မစားရ၀ခမန်း တိုးတက်သမျှတော့ ကျုပ်မြင်သမျှ အကုန်ဘယ်နှယ့် ပြောမလဲဗျ။ ကိုယ့်လူထု အားမငယ်အောင် တစ်ယောက်တစ်အား လုပ်နိုင်သမျှလေးတော့ တောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောရတာ ငွေလိုိက်ချေးသလောက် မျက်နှာ မငယ်ပါဘူး အမောင်ရာ။
နောက်တစ်ခုကတော့ ပညာရေးပဲဗျ။ ကျုပ်ရဲ့ တူမကမွေး မြေးလေးပေါ့။ ခင်ဗျား မမြင်ဘူးပါဘူးဗျာ။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်နေသူလေးဗျ။ ကျုပ် အလည်များရောက်တော့ ကလေးမလေးက တစ်တန်းရောက်ပြီ။ ခင်ဗျားသိသလား။ ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာ စိုက်စရာ ပျိုးစရာ မြေမရှိဘဲ တိုက်တွေကားတွေနဲ့ ပြွတ်သိပ်နေတဲ့နေရာ။ ကျုပ်မြေးက သင်ရတဲ့စာမှာ စိုက်ပျိုးရေးကပါသပြန်တဲ့။ ကျုပ်ဖြင့် အံ့သြချက်မယ် ကမ်းကုန်သဗျို့။ သင်ပြီလား အဲဒီသင်ခန်းစာဆိုတော့ မသင်သေးဘူး ဆိုတာ ဆရာမက မသင်တတ်တာလား ဘာလားတော့ကျုပ်မသိချင်ပေါင်ဗျ။ ဒီလူမမယ် ခြောက်နှစ်သာသာကလေးကို စိုက်ပျိုးရေးဖတ်စာ ငွေအကုန်ခံ ရိုက်မယ့်အစား ကျုပ်သာ သမ္မတကြီးဆို နယ်လှည့်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး နယ်တကာလှည့်လို့ အမှန်တကယ်စိုက်ကြသူများကို ပံ့ပိုးကူညီ သင်ကြားပေးလိုက်ချင်တာဗျ။
မောပါရဲ့ဗျာ။ ဒီနားရပ်ပါစေ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ လယ်သမားစိုက်စရာမြေမရှိတဲ့အကြောင်း မဆက်ချင်ဘူးခင်ဗျ။
တကယ်ပါပဲ ကျုပ်လည်း ဘာကြောင့်မှန်း မသိ။ အခုတလောတော့ တကယ့်ကို သမ္မတဖြစ်ချင်တယ်အမောင်။
Posted in: Bharadwaj , Satire , သရော်စာ , ဟာသ